SSB: Ku dhawaad 15% waa ajaaniib. - NorSom News
SSB: Ku dhawaad 15% waa ajaaniib.
Sida lagu sheegay warbixin iyo tirokoob ay soo saartay wakaalada tirokoobka iyo xog uruurinta ee SSB, waxaa Norway kunool ku dhawaad 800.000 qof oo ah dad ajaaniib ah iyo caruur ay wadanka ku dhaleen. Tiradaas oo u dhiganta qiyaastii 15% bulshada Norway.
Sanadkii tagau ee 2019, waxaa tirada ajaaniibta Norway kusoo korortay 25.400 qof.
Qowmiyada Polandiiska(Poland) ayaa hada mida ugu badan ee Norway ajaaniibta Norway, waxaana soo labeeyo dadka ka yimid Lituen, halka Soomaaliduna ay kujiraan booska sadexaad. Liiska ka fiiri sawirka hoose.
Ajaaniibta Norway kunool ayaa sanadkii tagay wadanka ku dhalay 9500 oo ilmood, iyada oo guud ahaan isku dar tirada caruurta ay ajaaniibtu Norway dhaleen(Generationka labaad) ay gaarayaan 188.800.
Xigasho/kilde: Nesten 15 prosent er innvandrere
Previous articleFHI: Ilaa hada tiradan ayaa Norway laga helay hargabka Corona-Virus.
Next articleSSB: Tiradan soomaalida ah ayaa Norway kunool.